Falanqaynta habka samaynta cilada ka mid noqoshada slag ee shubka birta ee epc | Yingyi
1 Baahsanaanta cilladaha ka mid noqoshada slag ee shubka birta leh epc
Aad bay u adagtahay in la soo saaro birta wax lagu shubo oo leh caaryar luntay. Waqtigan xaadirka ah, badankoodu waa dhar-xidhka-iska-caabbinta, kulayl-iska-caabbinta iyo shubka-iska-caabbinta iyada oo aan la farsamayn ama habayn kayarayn, ama qaar kale oo dhejisyo derbi-dhuuban ah. Sababaha ugu muhiimsan ee cilladaha shubanka birta kaarboonka hooseeya waa carburization aan sinnayn iyo cilladaha ka mid noqoshada slag ee qaybo qaro weyn iyo kuwo waaweyn. Tuubbooyinka birta ah ee leh dhumuc gaar ah iyo inta badan shubka birta kaarboonka hooseeya, saamiga carburization, ku darista slag ama cilladaha porosity ayaa ka badan 60%, taas oo ka dhigaysa birta kaarboon hoose iyo birta qaro weyn ayaa noqda dhibaatada adag ee habka shubista caaryada lumay, oo xitaa la tixgeliyey in habka shubista caaryada lumay aysan ku habboonayn shubista birta.
1.1 Qaababka cilladaysan ee shubka birta epc
Cilladaha shubista birta epc waa ku darida slag, porosity iyo carburization. Qaabka cilladaha ma aha mid joogto ah, cidhifka cilladdu waa mid aan caadi ahayn, cufnaanta cilladduna aad bay u kala firdhisaa, taas oo lagu muujiyay midabyo kala duwan oo ku saabsan jaantuska birta. Qaabka ciladaha ururintu inta badan waa qaab kooxeed leh xuduud daahsoon iyo midab kala firidhsan, taas oo ay adagtahay in laga saaro habayn.
1.2 Qaybta cilladaha ee qaybaha birta tuurista caaryada lumay
Saamiga cilladaha ku jira shubista birta epc waa mid aad u sareysa. Oo ay ku jiraan xidhashada -, kulaylka - iyo shubka u adkaysta daxalka, ama wax kale oo dhuuban - iyo dhejisyo bir ah oo dhumuc weyn leh, iyada oo aan lahayn ama aan lahayn mishiin. Duubista birta dhuuban ee gidaarka ah, cilladuhu waxay u badan yihiin daldaloolo iyo godadka dhuuban ee xididka iridda ama kor u kaca. Duubista birta derbiga qaro weyn, cilladuhu waa cilladaha maqaarka hoostiisa ka hooseeya. Shubitaanka birta kaarboonka ee hooseeya, cilladuhu inta badan waa cilladaha carburization dusha aan sinnayn.
1.3 Qaybaha u nugul cilladaha epc shubista birta
Dhumucda gidaarka iyo kaarboonka ee shubka birta epc way ku kala duwan yihiin qaybaha ay u fududahay inay dhacaan. Darbiga dhuuban ee saddex dhejis oo adkaysi u leh, ayaa inta badan ka soo muuqda kabadaha iyo albaabbada ama qaybaha ku xidhan ee kor u kaca. Qaybaha ku xidhan habka shubista shubista, socodka muddo dheer, si loo ilaaliyo wakhtiga kulaylku waa dheer yahay, birta dhalaalaysa waxay kululaysaa walxaha caaryada, walxaha caaryada, dhalaalka qayb ahaan waxay nuugaan gaas badan oo ku jira birta dareeraha ah iyo ururinta slag iyadoo la xannibay. , qaboojinta birta dhalaalaysa iyo adkeynta adkaynta, fududahay in la sameeyo qaybahan ka dib qaboojinta foomamka adag ee daloolka, porosity yaraynta, cilladaha isku dhafan.
2. Gaar ahaan buuxinta caaryada ee epc kabka birta
Cilladaha tuurista ayaa la sameeyaa wakhtiga shubista habka adkaynta, guud ahaan wakhtiga buuxinta shubista yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waa mid aad u gaaban, iyo wakhtiga buuxinta wax-qabadyada waaweyn sidoo kale waa gaaban yahay. Si ka duwan shubista daloolka caadiga ah, gaar ahaan buuxinta caaryada ee shubista epc waa sababta ugu weyn ee cilad ku darista slag ee shubista birta epc.
2.1 Buuxinta qaabka shubka birta epc
Sida habka buuxinta birta dareeraha ah ee epc, cilmi-baarisyada intooda badani waxay ku saleysan yihiin habka buuxinta epc ee aluminium aluminium, badankooduna waxaa lagu buuxiyaa cadaadis xun. Xaaladahan oo kale, qaabka buuxinta birta dareeraha ah waa in ka dib marka la soo galo "daloosha" ka soo baxa albaabka gudaha, birta hore ee dareeraha ah ayaa hore u riixeysa qaab faneedka. Marka la eego ficilka cuf-isjiidadka, biraha dareeraha ah ee buuxinaya hore ayaa hoos u dhacaya, laakiin isbeddelka guud waa in laga riixo albaabka gudaha ilaa "daloosha" la buuxiyo. Qaabka xadka ee xiriirka ka dhexeeya birta dareeraha ah iyo qaabka waxay la xiriirtaa heerkulka birta dareeraha ah, sifooyinka walxaha qaabka iyo xawaaraha buuxinta. Haddii heerkulka birta dareeraha ah uu sarreeyo, cufnaanta qaabku waa yar yahay xawaaraha buuxintuna waa dhakhso, xawaaraha guud ee horumarinta biraha dareeraha ah waa dhakhso. Waxay ku kala duwan tahay nooca daawaha, heerkulka shubida, aagga sprue, xawaaraha shubida, cufnaanta muuqaalka, heerkulka sare ee hawada hawada ee daboolka iyo cadaadiska taban. Aluminium aluminium ah oo aan lahayn cadaadis taban oo ku shubaya, isdhexgalka u dhexeeya birta dareeraha ah iyo qaabka waxaa loo qaybin karaa afar nooc iyadoo loo eegayo shuruudo kala duwan: qaabka xiriirka, qaabka nadiifinta, qaabka burburka iyo qaabka ka qaybgalka.
2.2 Qaab-dhismeedka qallafsan iyo saamaynta ku-xidhnaanta darbiga ee buuxinta birta dareeraha ah
In caaryada ee wax soo saarka ee bir tuur, qaybaha birta ah ee la tuuray, shirkadaha Shiinaha ayaa ku jira habka tuurista ku soo rogaan cadaadis taban oo ku saabsan shubista ciid qalalan, si ay u adkeeyaan caaryada ciidda qalalan, samee caaryada leh xoog ku filan iyo qallafsanaan, si ay uga hortagaan saameynta birta dareeraha ah iyo qulqulka, hubi daadinta dhamaystiran iyo adkaynta geeddi-socodka si wax ku ool ah, si loo helo qaab-dhismeed dhammaystiran oo shub ah. Caaryada ciidda engegan waxay leedahay xoog iyo qallafsanaan ku filan iyada oo aan la kordhin dhererka sanduuqa ciidda. Waxay door muhiim ah ka ciyaartaa horumarinta tignoolajiyada tuurista qaabka lumay.
3 Falanqaynta isha iyo thermodynamics iyo kinetics ee ku darida slag ee birta dhalaalaysa
Waxaa jira dhowr ilo oo slag iyo gaas ah oo ku jira birta dhalaalaysa, oo ay ku jiraan hadhaaga iyo gaaska alaabta pyrolysis sida gasification, haraaga iyo gaasta laga soo saaro habka dhalaalidda ee birta dhalaalaysa, iyo hadhaaga oksaydhka ee lagu sameeyay oksaydhka birta dhalaalaysa, iyo kala dirida qaar ka mid ah gaasaska birta dhalaalaysa ee heerkulka sare leh. Sababtoo ah cufnaanta yar ee dhuxusha iyo gaasaskan, waxay si tartiib tartiib ah u sabeyn doonaan habka buuxinta iyo habka qaboojinta dareeraha ka hor inta aan la adkeynin, oo u sabbeeyaan cadaadiska hoose ee hoose ee hoos yimaada ficilka cadaadiska xun.
4 Siyaabaha iyo soo jeedinta lagu yareeynayo ku darida birta qaybo ka mid ah oo leh tuurista caaryada luntay
4.1 Si toos ah u yaree ku darida asalka ah ee birta dhalaalaysa
Yaraynta ku darista birta dhalaalaysa ka hor inta aan la shubin waa mid ka mid ah siyaabaha ugu muhiimsan ee lagu dhimo ciladaha ku darida caaryada luntay. Waxaa jira habab badan oo lagu nadiifiyo birta dhalaalaysa, sida isticmaalka walxaha slagging, ku tiirsanaanta xayeysiiska ee wakiilka nadiifinta ee ku darida, ku dhajinta qaybaha yaryar ee ka mid ah qaybaha waaweyn ee wakiilka nadiifinta ee lagu daray, samaynta mugga weyn ee ka mid noqoshada. Qaybaha, taas oo faa'iido u leh si loo hagaajiyo xaaladaha firfircoon ee sabaynta.
4.2 Yaree ku darida birta dhalaalaysa iyadoo loo marayo tillaabooyin tignoolajiyada oo xoojiya sii daynta ka mid noqoshada
(1) Naqshad macquul ah ee nidaamka kicinta shubida. Sida ugu fog ee suurtogalka ah oo leh wax ka yar hal sanduuq oo shub ah, inta suurtogalka ah si loo yareeyo jiritaanka birta dhalaalaysa ee wakhtiga nidaamka shubista, taas oo ah, la yareeyo ama la joojiyo orodka; In ka badan hal sanduuq oo shub ah ayaa si lama filaan ah uga dhigi doonta nidaamka shubista mid aad u dheer. Marka birta dhalaalaysa ay ka buuxsamaan nidaamka daadinta, way fududahay in la soo saaro qallafsanaan iyo firidhsi ku jira kanaalka qaybta badan ee leexinta iyo isbeddelka ee nidaamka shubka, taas oo yaraynaysa heerkulka birta dhalaalaysa, waxay keentaa oxidation birta dhalaalaysa, xoqin derbiga dhinaca. ee sprue, oo waxay kordhisaa ka mid noqoshada asalka ah ee birta dhalaalaysa.
(2) waxay yareeyaan muuqaalka kala-goysyada xabagta. Farqiga isku xidhka qaabka oo aad u badan, fududahay in la keeno farqiga iyada oo isbeddel badan oo xabagta ah, taasoo keentay kala-goysyada dhejiska ah convex ama concave. Sababtoo ah cufnaanta sare ee xabagta convex, gaaska iyo hadhaaga ka dib gaaska ayaa ka badan, taasoo keentay kororka wadarta qadarka qashinka; Xabagta koodhka ah ee koodhka ah waxay samaysaa farqi, marka dahaadhka dahaadhka, dahaarka leh awood aad u xoog badan ayaa si fudud u gasha farqiga concave.
(3) Hoos u dhigista ku habboon ee cadaadiska xun. Cadaadiska taban waa sabab muhiim ah oo kordhinaysa qaska ay keento buuxinta birta dhalaalaysa. Qalalaasaha sii kordhaya wuxuu keenaa birta dhalaalaysa si ay u xoqdo nidaamka shubista iyo gidaarka "daloosha", iyo birta dhalaalaysa si ay u daadiyaan wax badan, samaynta wareegga qulqulka, si fudud ugu lug leh isku-darka iyo gaaska. Habka ku habboon waa in la daboolo xoogga ku habboon iyo qallafsanaanta qallalan ee ciidda qallalan iyo in la hubiyo in wax-qabadku aanu dumin habka buuxinta buuxinta, hoos u dhigista cadaadiska taban, ka sii fiican.
Waqtiga boostada: Seb-24-2021